Maitiro ekuteerera kumimhanzi pane iyo iPhone 7 ine mahedhifoni uchiichichaja (sekureva kwaApple) | IPhone nhau
Maitiro ekuteerera kumimhanzi kubva ku iPhone 7 ine mahedhifoni uchichichaja (sekureva kwaApple)
Ignacio Sala | | iPhone 7, Apple zvigadzirwa
Mumwe wemibvunzo yaibvunzwa nevazhinji vezvenhau nevashandisi pakatanga kubuda runyerekupe umo zvainzi Apple yanga iri kuronga kubvisa jackphone zvachose. mashandisiro anoita vashandisi mimhanzi yavo yavanofarira nemahedhifoni nepo iPhone ichibhadharwa, sezvo nharembozha yekubatana yaizove mheni sezvo yakazosimbiswa mukuratidzwa kweiyo iPhone 7 mazuva maviri apfuura. Dambudziko iri kwazvino uye kusvikira tajaira kwaro, rinongokanganisa mushandisi, kwete kambani. Muverengi we9to5Mac akabata Phil Schiller kuti abvunze kuti angabhadharisa sei iPhone uye kuteerera mimhanzi panguva imwe chete nemahedhifoni.
Kuedza kugadzirisa dambudziko "diki" iri kumushandisi, Apple yakaratidza maAirPods anobatana neBluetooth kuchinhu uye anotibvumidza kuteerera mimhanzi kubva ku iPhone yedu isina tambo patiri kuchaja chishandiso. Asi pamutengo we € 179, Handifunge kuti iri mhinduro kune vashandisi vanozongotenga iyi nyowani iPhone.
Heano mhinduro yaPhil kumushandisi:
Ini ndinoda kuteerera paAirPod dzangu apo yangu iPhone 7 Plus iri kubhadharisa nekuti ndakasununguka kutenderera.
Nekudaro, kana iwe uchida kuteerera kune wired mahedhifoni paunenge uchichaja iyo iPhone 7 zvinokwanisika kuti uzviite futi.
Iyo Apple Lightning Dock inosanganisira yehedhifoni jack yekushandisa wired mahedhifoni kana maspika uchichira.
Ndinovimba izvo zvinobatsira.
Sekureva kwa Phil Schiller, mhinduro ndeye "kutenga", iyo Dock Mheni ye iPhone izvo zvinotibvumidza kubhadharisa yedu iPhone 7 uye kwatinogona kubatanidza mahedhifoni tichichaya. Doko iri rine mutengo muApple Chitoro che45 euros.
Wakave wakasununguka nemhinduro yako. Kana mushandisi iri kekutanga kutenga iyo iPhone uye asina headphone ine 3,5 jack paruoko (zvisingaite asi zvisingaiti) iye aifanirawo kutenga nyowani nyowani. Zvinoenderana nemhinduro, Apple ine mhinduro yezvese zvinhu, sekureba sekubuda kwako.
Muchinyorwa changu chinotevera ndinokupa mhinduro ye kukwanisa kuteerera mimhanzi yako yaunofarira neEarPods nyowani paunenge uchichaja iyo iPhone 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Maitiro ekuteerera kumimhanzi kubva ku iPhone 7 ine mahedhifoni uchichichaja (sekureva kwaApple)
iko kubatana kweayo airpods ndeyebluetooth? Ini ndaifunga kuti ndinonzwisisa kuti yaive isina waya yakagadzirwa nechipiri chakazvipira mumuchina uye chip nyowani mune yemepodhi.
Ehe, nekuti ivo vanogona zvakare kubatana kune mamwe madhivha asiri Apple, sekugona kwandakaita kuverenga.
Ajairire BT uye usanyunyute, asi nzwisisa zvimwe zvakachipa, zvirinani uye izvo zvisingadonhe kubva munzeve…. Aya maAirPod anodonha akagadziriswa, angangoita akawanda….
Inowanikwa epamutemo mavhidhiyo eiyo iPhone 7, Apple Watch Series 2 uye AirPods